Soo dejisan HOA Tracking Database 2.4.5 – Vessoft
Soo dejisan HOA Tracking Database
HOA Socodka Database – software ah si ay u maareeyaan iyo baadhaan xogta ku jirta database ee ururka mulkiileyaasha. HOA Socodka Database u saamaxaaya in ay abuuraan maktabad waraaqaha helitaanka fudud iyo qaybinta macluumaadka ku saabsan xisaabaadka, ganaax, bixinta iyo xisaab kale macmiilka. Software waxuu inay ku maamulaan koontada la miisaamo si fudud oo u eegto taariikhda lacag-bixinta ee wararka. Sidoo kale HOA Socodka Database taageertaa maamulka tagaasida abuuridda, daabacaadda iyo post ee waraaqaha la digniinta horay loo tifaftiray. HOA Socodka Database si toos ah badbaadinayo nuqulo ka mid ah isgaadhsiinta ee taariikhda haystaha akoonka.
Helitaanka database ee ururka mulkiileyaasha
Maamulka iyo raadinta macluumaadka lagama maarmaanka ah
Taariikhda bixinta View warbixinnada
Waxay abuurtaa ah warqado digniin templated
Keydsan nuqulo ka mid ah isgaadhsiinta toos ah
HOA Tracking Database Software la xiriira: